#JusticeForGeorge - Kylian Mbappe Oo Hoggaaminaya Ololaha Caddaaladda Loogu Raadinayo Ninkii Madoobaa Ee Maraykanka Lagu Dilay - Gool24.Net
#JusticeForGeorge – Kylian Mbappe Oo Hoggaaminaya Ololaha Caddaaladda Loogu Raadinayo Ninkii Madoobaa Ee Maraykanka Lagu Dilay
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa ku biiray ololaha caddaaladda loogu baadi doonayo ninkii Madoobaa ee Isniintii lagu dilay waddanka Maraykanka ee George Foyd, kaas oo dhimashadiisu gadood ka abuurtay dalkaas, isla markaana mudaharaadyo rabshado wata ay ka dhaceen dhawr gobol.
Sarkaal boolis ah oo lagu magacaabo Derek Chauvin ayaa si axmaqnimo leh u dilay George Floyd oo aan hubaysnayn, kaas oo isaga oo dhulka jiifa oo laba-dible u xidhan uu qoorta kaga fadhiistay, jilibkiisana ku hayey illaa intii ay naftu ka baxaysay.
Muuqaal argagax leh oo dunida oo dhan lagu baahiyey, ayaa waxa uu soo bandhigay Chauvin oo muddo siddeed daqiiqadood iyo 46 seken ah qoorta kaga fadhiya George Floyd oo ku qaylinaya ereyo naxdin lahaa oo uu ku sheegayay inay naftu kasii baxayso, laakiin askarigan oo aan dan ka lahayn ayaa kusii fadhiyey illaa intii uu dhimanayey.
Chauvin ayaa Jimcihii lasoo xidhay, laakiin waxa kale oo shaqada laga caydhiyey afar sarkaal oo kale oo iyaguna kula sugnaa goobta dilka.
Ciyaaryahannada madow ee dunida ayaa ku biiraya olole lagaga dalbanayo Maraykanka in dhibaatada lagu hayo Maraykanka, gaar ahaan ninka dhintay ee Floyd la siiyo caddaalad.
Xiddigga PSG ee Kyian Mbappe ayaa shalay qayb ka noqday ololaha, waxaanu Maraykanka ka dalbaday in caddaalad la siiyo Foyd.
Kylian Mpappe ayaa bartiis Twitterka soo dhigay ereyo kooban oo uu ku yidhi: #JusticeForGeorge” oo nuxurkeedu yahay “#GeorgeCadaddaaladHaHelo”.
Kylian Mbappe kalidii maaha, waxaa se ciyaar shalay ka dhacday waddanka Jarmalka oo ay isku haleeleen Schalke iyo Werder Bremen uu laacibka khadka dhexe ee Weston McKennie oo Maraykan-madow ah uu gacanta kusoo xidhay maro ay ku qoran tahay: “George Caddaalad Buu Rabaa”
McKennie ayaa ciyaarta kaddib bartiisa bulshada kusoo qoray in dareen argagax leh uu ka qaaday arrinta, laakiin ay tahay wax jira oo dhibaatooyin lagu hayo dadka madowga ah.
Xiddiggii hore ee Arsenal ee Ian Wright ayaa isaguna sheegay in laga daalay faquuqa madowga lagu hayo, waxaanu tilmaamay in daawashada qaabka uu Foyd u dhintay ay ku keentay ‘Daal’.
Alex Morgan oo ah xiddigta xulka qaranka haweenka Maraykanka, ayaa waxay iyaduna sheegtay in Maraykanka aanay wali ka helin caddaalad iyo in xuquuqdooda ay dadka madow si la siman caddaanka u helaan.
Halyeyga usoo baxay dadka Madow ee Colin Kaepernick oo sannadkii 2016 Maraykanka ka abuuray kacdoon ay ciyaartooyo badan sameeyeen oo Jilibka dhulka ay dhigayeen marka heesta calanka Maraykanka la shido ka hor inta aanay ciyaaruhu bilaabmin, ayaa isaguna luuqaddii ugu adkayd kaga hadlay dhacdadan, waxaanu hormood u yahay xoogagga mudaharaadka wada.
Colin Kaepernick ayaa ololaha uu wado uu sabab u noqday in lagu tilmaamo ‘Mohammed Ali Clay’ cusub oo usoo baxay dadka Madow ee Maraykanka.